फैशन किनमेलको लागि एक गाइड
आज, धेरै डिजाइनरहरूले हामी नीलो जूताहरूमा ध्यान दिन्छन् सुझाव दिन्छ। तर यस क्रममा तपाईंको शैली र व्यक्तित्वलाई जोड दिन छविमा यस्तो उज्ज्वल उच्चारणको लागि, तपाइँलाई के थाहा छ र तिनीहरूलाई कसरी पहनेको छ।
यसैले हामी तपाईंलाई नीलो जूताका सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेलहरूको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछौं, साथै साथै धेरै सिफारिशहरू जुन तपाईंको छनौटमा गल्ती गर्दैन।
नीलो जूताका लोकप्रिय मोडेल
यदि हामी अहिलेको मोडेलको बारेमा कुरा गर्दछौं जुन फैशनका महिलाहरू बीचमा लोकप्रिय छ, सम्भवतः, हामी निम्नलिखित विकल्पहरू हाइलाइट गर्न सक्छौं:
प्लेटफार्ममा नीलो जूता;
नीलो जूता एक स्थिर एड़ी संग;
नीलो जूता - ठोस एकमात्र मा कुनै एड़ी संग जूता ।
प्राय: पसलहरूमा त्यहाँ सर्दिया वा शरद ऋतु महिला साबर श्वेतहरू निलो रंगका साथ साथै चमडा मोडेलहरू छन्। धेरै रोचक विभिन्न रंगका विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गरी लगाउने लगतहरू देख्नेछन्। उदाहरणको लागि, गाढा भुरालो चमडा अनुहार र एक गाढा निलो साबर आधारको साथ, फेरोक्जमा परिणत भयो।
नीलो जूताहरू बोल्दै, यो नीलो रबर जूताहरू उल्लेख गर्दैन पनि असम्भव छ, जुन आज संसार भरमा फैलिएको फैशनस्टारको वस्तु हो। उपस्थितिमा तिनीहरू लाश जस्तै हुन्छन्, तर तिनीहरूले डुब्नको शरद ऋतुको लागि अयोग्य लाभ पाउनेछन् - राम्रो तरिकाले तपाईंको खुट्टा नमी बाट सुरक्षित गर्ने क्षमता।
र विशेषतया चौंकाउने प्रेमीहरूको लागि, धेरै निर्माताहरूले ऊँची एप्ससँग उज्ज्वल नीलो लासयुक्त जेनरेट गर्छन्।
के नीलो सेतो लगाएर के गर्ने?
अन्य उज्ज्वल रंगहरूका साथ महिला निलो लगायतको संयोजनबाट बच्न प्रयास गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, रातो, पहेँलो वा हरियो। किनभने यस अवस्थामा तपाईँले अतिभारित छवि सिर्जना गर्नु र निस्सन्देही देख्नु भएको जोखिम।
यद्यपि, अघिल्लो नियमबाट त्यहाँ एक अपवाद हो, जब यो गाढा नीलो चमडा जूतामा आउँछ। यस अवस्थामा, तपाईंको छवि पुरालेखहरूमा बनाइएको हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, महिलाको कालो नीलो सर्दिया जूता, जीन्स र एक थैला, टोनदेखि जूताहरूमा मिलाईएको, पहेंलो पहेंलो वा हरियो शर्टसँग मिलेर धेरै स्टाइलिश देखिन्छ।
तर कुनै साधारण पोशाकमा तटस्थ रंगहरू (उदाहरणका लागि, सेतो, कालो वा खैरो) को बनाइन्छ, भित्री नीलो शरद ऋतु वा सर्दियाको छालाले स्टाइलिशता र मौलिकता थप्न सक्छ।
तस्विर दृष्ट्यात्मक बनाउनको लागि, निलो जुत्ता एक हैंडबैग वा टोनमा कुनै अन्य सहायक संग संयोजनमा थप गर्न निश्चित हुनुहोस्।
त्यसोभए, हाम्रो सल्लाहको साथ सशस्त्र, तपाइँ सुरक्षित रूपमा स्टाइलिश नीलो जूताहरू खरिद गर्न स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ।
महिलाहरु को शरद ऋतु बिना ऊँची एड़ी
पेललेटहरु संग ड्रेस - ठाँउ र चमक
स्नातकको लागि जूता
3D प्रभावको साथ टी शर्ट
रेलको साथ छोटो पोशाक
मजेदार टी-शर्टहरू - मूल कुराहरू तपाईंको मनमा सुधार गर्न
महिला डेमी सीजन लम्बेड जैकेटहरू
महिला सर्दियों कोट sintepone मा
शरिर ब्लाउजमा छोटो आस्तीनको साथ
लटकन संग श्रृंखला
आफ्नै हातको साथमा शीत ग्रीनहाउस
कोट को एल्मा
गीगी हदीदले आफ्नी आमालाई जेन मलिकलाई परिचय दिए
डान्ड्रफ कुत्तों - के गर्न को लागी?
नींबूले मा स्पंज केक
जाडोको लागि डिब्बाबंद मिर्च
शहरी यातायातको संग्रहालय
मार्क जैकबक्स बिन्दुहरू
निलो महिला थलो
कुकुर रोए - लक्षण
स्लिपिङ रस्सीसँग अभ्यास गर्दछ
क्यान्सरको रोगमा आँखाहरू धुनु भन्दा बाहिर?
ब्रान्ड र सिग्नेक - के फरक छ?
Decoupage caskets - विचारहरु
एस्केन्सन - संकेतहरू र विश्वासहरू
पूरा गर्नका लागि फैशनेबल लुगाहरू